Ubulungisa Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Linganisa izikali zokuxhasa inyani kwaye usebenze ngeyona nto iphezulu.
Intsingiselo yekhadi le-tarot «Ubulungisa»
La Ikhadi leTarot lezoBulungisa linento yokwenza nemvakalelo yokuziphatha kwaye yintoni ebangela uvelwano, imfesane kunye nokuqonda okusesikweni. Ukusukela ngexesha likaSolomon, lo mfanekiso ubonakalise umgangatho wokuphathwa kakuhle koluntu kunye nokungenamkhethe.
Rhoqo kubandakanya umfanekiso weenyawo okanye ileli enceda ukulinganisela iimfuno ezikhuphisanayo ngokuchasene nokulunga okuqhelekileyo, kunye nekrele elintlangothi-mbini ukuya uphawu lokuchaneka okufunekayo ukwenza izigqibo ezicacileyo, eli khadi lisikhumbuza ukuba silumke ngeenkcukacha ezibalulekileyo. Kuyimpazamo ukujonga okanye ukunciphisa into xa isiza kweli khadi. Umthetho we karma uboniswa apha - okuza kwajikelele kubuya kwajikelele.
Ubonwa njengeqela elingakhethi cala elineembono zalo.
Ikhadi lezoBulungisa ikucebisa ukuba umamele ngenyameko Ngelixa abanye bechaza ingxelo yabo yeziganeko kunye nendima abayidlalileyo. Awudingi ukunika ingxelo. Indima yakho kukujonga, mamela ngononophelo, mamela ngononophelo, kwaye ugcine ubukrelekrele bakho njengoko ibali lisenzeka.
Njengoko ungqina iingxelo zabantu ngeziqu zabo, ukuqonda kwakho kuya kudlula kumagama owevayo. Ukuthelekiswa okufihlakeleyo kunye nemikhombandlela iya kutyhila iinyani eziya kukuvumela ukuba wenze uvavanyo olunobulumko noluchanekileyo.